izixazululo zokukhanyisa eziholelekile - Huayi Lighting
izixazululo zokukhanyisa eziholelekile
Usendaweni efanele ye- izixazululo zokukhanyisa eziholelekile.Okwamanje usuyakwazi lokho, noma ngabe yini oyifunayo, uqinisekile ukuthi uyokuthola kuvuliwe Huayi Lighting.siqinisekisa ukuthi kulapha Huayi Lighting.
Izinto zokugcwalisa i-Huayi Lighting zingaba zemvelo noma zenziwe. Zigqoka kahle futhi zinobukhulu obuhlukahlukene ngokuya ngokusetshenziswa kwesikhathi esizayo..
Sihlose ukunikeza ikhwalithi ephezulu kakhulu izixazululo zokukhanyisa eziholelekile.kumakhasimende ethu wesikhathi eside futhi sizobambisana namakhasimende ethu ngokunikela ngezixazululo ezisebenzayo nezinzuzo zezindleko.
Ihhotela laseSri Lanka-Marriott
Njengesakhiwo esiyingqophamlando seWeligama Bay eSri Lanka, kubaluleke kakhulu ukuqinisekisa umphumela omuhle wokukhanyisa.UHuayi unikeze zonke izixazululo nemikhiqizo yokukhanyisa, kufaka phakathi ukukhanyisa kwe-LED nokukhanyisa okuhlobisa ngaphakathi nangaphandle.
I-125th ne-126th Canton Fair ngo-2019
Umhlangano waminyaka yonke weqembu 2019
Umhlangano waminyaka yonke weqembu wango-2019
Umthengisi ohamba phambili ophakeme kakhulu we-KP31713-5
Ukukhanya kwePendan Isitayela Classic Indwangu: Insimbi + Indwangu Qeda: Ukubhema Okumpunga Umthombo Wokukhanya: E27
I-China-Studio City Macau
Lokhu kungumlando ngesondo eliphakeme kakhulu lase-Asia - iStudio City Macao futhi lihlangana namahhotela, izinxanxathela zezitolo, amakhasino nemakethe yokudla. U-Huayi, uchwepheshe owaphothula amaphrojekthi amaningana ekhasino eMacau, naye wabamba iqhaza ezingxenyeni zokukhanyisa. Ngokusebenzisana okujulile nabaqambi, umphumela wokukhanyisa owanelisayo uthole ukwazisa okuphezulu ngoHuayi futhi.